Minisitry ny filaminana anatiny : “hatao ezaka manokana ny ady amin’ny fakana an-keriny” | NewsMada
Minisitry ny filaminana anatiny : “hatao ezaka manokana ny ady amin’ny fakana an-keriny”
“Tsy adin’ny mpitandro filaminana irery fa an’ny rehetra ny ady amin’ny fakana an-keriny. Hasiana ezaka manokana ny ady amin’ny fakana an-keriny…”, hoy ny fanazavan’ny minisitry ny Filaminana anatiny, ny contrôleur général de police, i Erick Michel Wouli Soumah Idrissa.
“Ny ady amin’ny fakana an-keriny, tsy adin’ny mpitandro filaminana irery fa an’ny rehetra. Tsy misy afa-tsy ny fifanomezan-tanana amin’ny fanomezam-baovao eo amin’ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana ihany ny ahafahana misoroka izany”, hoy ny minisitry ny Filaminana anatiny, ny contrôleur général de police, i Erick Michel Wouli Soumah Idrissa nandritra ny famindram-pahefana teo aminy sy ny minisitra teo aloha, ny contrôleur général de police, Andrianisa Mamy Jean Jacques. Nohamafisiny fa ilaina ny fifanomezan-tanana amin’ny fanomezam-baovao amin’ireny trangana fakana an-keriny ireny.
Ankoatra ny raharaha fakana an-keriny, nisy ny laharam-pahamehana napetraky ny minisitry vaovao. Isan’izany ny fametrahana filaminana manerana ny Nosy amin’ny alalan’ny fandrakofana ny faritra stratejika rehetra sy ny fametrahana polisy hita maso. Vaindohan-draharaha koa ny hahatontosa ny fifidianana ka hamafisina ny fitandroana ny filaminana, mandritra sy aorian’ny fifidianana. Hotohizana sy hohamafisina koa ny fampanajana ny fitsipi-pifehezana ary indrindra ny ady amin’ny kolikoly. Nilaza kosa ny minisitra teo aloha fa andraikitra ifandimbiasana ny fitantanana ny minisitera, na izany aza, mitohy ny fiaraha-miasa sy ny fifanomezan-tanana amin’ny maha polisim-pirenena azy ireo.